fampiatoana Factory | Ireo mpanamboatra sy mpamatsy fampiatoana Sina
Niteny i Bogie na ny famaky amponga dia andiana fampiato miaraka amina axe ao ambanin'ny semi-trailer na kamio. Ny axe bogie matetika dia manana axe roa miteny / spider na axe drum roa. Ny axles dia manana halava samy hafa izay miankina amin'ny halavan'ny tranofiara na kamio. Ny haben'ny axe bogie iray dia 24Ton, 28Ton, 32Ton, 36Ton. Betsaka ny mpampiasa no miantso azy ireo ho super 25T, super 30T, ary super 35T.
Fampiatoana mekanika fomba alemana BPW
Endri-javatra fampiatoana mekanika: ny fampiatoana mekanika fampiasa amin'ny alim-bolo Alemanina dia ny fampiatoana semi-trailer an'ny rafitra 2-axle, ny rafitra 3-axle, ny rafitra 4-axle, ny rafitra fampiatoana teboka tokana. Ny fahafaha-manao amin'ny takiana samihafa. Bogie araka ny filàna manokana .Nampita ny fanamarinana manara-penitra ISO sy TS16949 an'ny rafitra fanaraha-maso kalitao iraisam-pirenena. Rafitra fanaraha-maso kalitao hentitra mba hanomezana toky ny kalitaon'ny vokatra tena tsara. Ny vokatra dia malaza amin'ny tsena manerantany, ao anatin'izany ny tsena amerikana avaratra, amerika atsimo, eropeana, afrika ary atsimo atsinanana
FUWA fampiatoana mekanika fomba amerikana
Endri-javatra fampiatoana mekanika: fampiatoana mekanika FUWA amerikanina dia ho an'ny fampiatoana semi-trailer ny rafitra 2-axle, ny rafitra 3-axle, ny rafitra 4-axle, ny rafitra fampiatoana teboka tokana. Ny fahafaha-manao amin'ny fepetra takiana. Bogie araka ny filàna manokana .Nampita ny fanamarinana manara-penitra ISO sy TS16949 an'ny rafitra fanaraha-maso kalitao iraisam-pirenena. Rafitra fanaraha-maso kalitao hentitra mba hanomezana toky ny kalitaon'ny vokatra tena tsara. Ny vokatra dia malaza amin'ny tsena manerantany, ao anatin'izany ny tsena amerikana avaratra, amerika atsimo, eropeana, afrika ary atsimo atsinanana